के तपाईं वा परिवारमा कोही धुम्रपानको कुलतमा फस्नुभएको छ ? यस्ता छन् धुम्रपान छोड्ने उपायहरु : – Sadhaiko Khabar
के तपाईं वा परिवारमा कोही धुम्रपानको कुलतमा फस्नुभएको छ ? यस्ता छन् धुम्रपान छोड्ने उपायहरु :
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण २२, २०७७ समय: १८:४५:५०
काठमाडौं/ धुम्रपानको लत लागिसकेपछि छोड्न त्यती सजिलो हुँदैन । निश्चय नै यसको लागी आत्मबलको खाँचो पर्दछ । जसले आफ्नो मन र इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन त्यसले चाहेर पनि धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थहरुको सेवन त्याग्न सक्दैन ।
धुमपान छुटाउने कुनै अचुक औषधि छैन तर छोड्न सकिन्छ । धेरैले छोडेका पनि छन् । धुम्रपान गर्ने धेरैजसोलाई सोध्दा उनीहरुलाई यसबाट हुने हानिहरुबारे एउटै गुनासो के छ भने धुम्रपान छोड्नलाई सकिरहेका हुदैनन् । धुम्रपान छोड्न पर्याप्त तरिकाहरु तथा सुचना र जानकारीमुलक सामाग्रीहरु भेटिदैनन् ।
धुम्रपान छोड्न चाहनेले उपयुक्त योजना बनाउन पर्दछ । धुम्रपान किन, कहिले र के का लागी छोड्ने र कसको सहयोग लिने भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ । धुम्रपान पुर्ण रुपले छोड्नलाई कसैको सहयोग आवश्यक पर्दछ भन्ने बिर्सनु हुदैँन ।
धुम्रपान छोड्न चाहानेले आफु बस्ने कोठाहरुमा यसले गर्दा हुने हानिहरुको तस्विर वा चित्र टाँस्ने गर्नुपर्छ । जसका कारण धुम्रपानतिर ध्यान केन्द्रित हुँदैन ।
यी उपाय अपनाउँदा दह्रो आत्मबलका साथ धुम्रपान त्याग्ने अठोट गरेमा अवश्य सफल हुन सकिन्छ । प्रयास गर्दा गर्दै पनि पुन शुरु गर्न सक्ने सम्भावना करीब एक महिनासम्म अधिक रहन्छ । त्यसैले यस्तो वातावरण सृजना हुन नदिन सचेत रहनुपर्छ । धुम्रपानको तलतल धुम्रपान छोडेको दुई तिन दिनसम्म अत्याधिक रहन्छ र त्यसपछि यो क्रम कम हुदै जान्छ । त्यसपश्चात खानामा रुची बढ्न थाल्छ । धुम्रपान छाडेको दुई हप्ता भित्रै २ देखि ३ केजी तौल बढ्न थाल्छ ।
धुम्रपान छोड्न निरन्तरता दिनका लागी के गर्नै ?
तौल बढ्ने र हृष्टपुष्ट हुने
धुँवारहित वातावरणमा बाँच्न पाउने पारिवारीक अधिकार पुरा हुने ।